Otu ahụhụ dị mkpa pụtara na mmelite kachasị ọhụrụ nke Adobe Creative Cloud | Esi m mac
Nnukwu ahụhụ na-apụta na Adobe Creative Cloud kacha ọhụrụ
Miguel Angel Juncos | | Mac OS X, Ngwa ndị ọzọ maka Mac, Mmemme Mac, ọtụtụ
A manyere Adobe ịwepu mmelite kachasị ọhụrụ site na Creative Cloud mgbe ọ kwusịrị na ụdị a nwere ike ịnwe edemede site na iji edemede ga-ewepụ ụfọdụ na-akpaghị aka data njirimara dị mkpa echekwara na Mac gị na mpaghara ma na-enweghị ọkwa ọhụụ. Ndapu na uche m di oke nkpa na ihe anapughi ikwu ebe obu na odi nkpa imeputa uzo di iche banyere otua iji mezuo nke a.
Nsogbu ahụ na-eme karịsịa mgbe onye ọrụ batara na Creative Cloud mgbe ọ wụnye nwelite kachasị ọhụrụ na nọmba mbipute 3.5.0.206. Mgbe onye ọrụ batara lelee nchekwa gị Na Onye Nchọta, ị ga - ahụ otu esi ehichapụ folda izizi echekwara na mkpụrụedemede na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ, nke pụtara na ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ndabere na aka iji weghachite folda ndị a, anyị ga-efunahụ ozi nkeonwe.
http://www.youtube.com/watch?v=0xKlFO3_j5ETal y como podéis ver en el vídeo, los clientes del Ọrụ nkwado ndabere na azụ data, bụ ahụhụ a kachasị emetụta ya, ebe ọ na-ezipụ data na folda mgbọrọgwụ yana faịlụ zoro ezo ".bzvol" na nke ahụ bụkarị na mkpụrụedemede mbụ faịlụ maka ọtụtụ ndị ọrụ Mac.
Maka nke a, ọtụtụ ndị ọrụ amaralarịrị BackBlaze, na-akwado nkwenye nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na n'ime usoro mmelite ahụ ka emepụtara folda zoro ezo akpọrọ ".a" iji wụnye ya chọrọ faịlụ mmelite na mmechi nke Creative Cloud, na n'oge usoro ahụ na-ehichapụ ọdịnaya nke faịlụ mgbọrọgwụ.
Adobe abanyela na-abụ abụ mea culpa:
Anyị maara na ụfọdụ ndị ahịa ahụla nsogbu a ma na-enyocha ya iji dozie nsogbu ahụ ozugbo enwere ike. Anyị na-akwụsị ntọhapụ nke mmelite ahụ ruo mgbe nsogbu ahụ edozi.
Ka ọ dị ugbu a, Adobe na-adụ ndị ọrụ ọdụ ebudatara mmelite Creative Cloud, etinyela ya. Maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ozugbo ịnweta Creative Cloud, Backblaze na-atụ aro ka ị mepụta folda "nri idide" site na ịkpọ aha ya na mkpụrụedemede nke mbụ na mkpụrụedemede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Nnukwu ahụhụ na-apụta na Adobe Creative Cloud kacha ọhụrụ
Otu nchekwa (ya na folda folda niile) lara urua gara aga, na mberede, nke ọma bụrụ nke mbụ na ndekọ ndekọ diski, jiri 200gb. Taa ka mụ na Adobe Spain kwurịtara okwu mana onye ọrụ aka ahụ edoghị ya anya, ha gwara m na ha kwenyere na ihe ọ na-ehicha bụ na igwe ojii? Ha gwara m zaa m, m na-eche. E wezụga nke ahụ, ọ hapụghị akara, ọ dị ka a ga-asị na ọ dịbeghị, ma Data Rescue, ma ọ bụ Disk Drill, ma ọ bụ Diskwarrior…. Amaghị m ụdị edemede ọ ga-abụ, ọ nweghị ihe natara site na ihe ọ bụla, ọbụnadị 1 mb.
Updatesra ++ na-emelite na arụmọrụ ka mma
Apple ga-akwadebe usoro mbụ na Dr. Dre